I-GUERIN Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeMbali
Lithini Igama Lokugqibela iGerin?
Inqampu yaseGuerin ivela kwi-Old French yokulondoloza okanye i- guerin , okuthetha "ukubukela okanye ukulinda." UGwaren nguhlobo lwesiWales lwegama, i-Guarin yeSpain, kunye neWarren yinto eqhelekileyo yeNgqungquthela.
Igama Igama: IsiFrentshi, isi-Irish, isiWelsh (Gwaren)
Igama Lenye igama : I- GEURIN, GEREN, GARIN, GUERRIN, GUERREN, GUERINNE, GUERREIN, GERIN, GWAREN, GUARIN
Abantu abaPhezulu abanegama likaGERERIN
I-Veronica Guerin - intatheli ye-Crimean reporter
UWilliam Robert "uBill" uGuerin - Umdlali wase-American owayengumqeqeshi we-hockey wangaphambili; uncedisi-jongene nomphathi jikelele we-NHL Pittsburgh Penguins
UJean-Baptiste Paulin Guérin - umzobi waseFrentshi
UJean-Marie Camille Guérin - u-immunologist waseFrench
UGilles Guérin - umdwebi waseFrench
Uphi igama le-GUERIN Igama loLuntu oluqhelekileyo?
Akumangalisi, inqampu yaseGuerin iyafumaneka kwiFransi, ngokutsho kwedatha yokusabalalisa igama kwi-Forebears; lihamba njengegama eli-59 eliqhelekileyo elidlulileyo kwilizwe. Kukwafaneka kakhulu kwi-Ireland (i-714th) kunye neChanada (933rd).
I-WorldNames PublicProfiler ibonisa ukuba igama leGuerin lidla ngokuqhelekileyo enyakatho-ntshona yeFransi, ngokukhethekileyo iBregagne (iBrittany), i-Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes kunye ne-Centre-Val de Loire.
Izibonelelo zoGenesalogy for the Name GUERIN
Iintsingiselo zegama eliqhelekileyo lamaFransi
Ukufumanisa intsingiselo yegama lakho lesiFrentshi igama elidlulileyo kunye nesi sikhokelo samahhala kwiintsingiselo kunye nemvelaphi yegama eliqhelekileyo lamaFrentshi.
I-Guerin Family Crest - Akusikho Oko Ucingayo
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto injengekhaya laseGuerin okanye iingubo zeengalo zeGerin. Iingubo zeengalo zinikwe abantu ngabanye, kungekhona iintsapho, kwaye zingasetyenziselwa ukusetyenziswa kuphela ngabantu abangenakuphazanyiswa inzala yomntu oye wanikwa ingubo yeengalo.
Ezinye Iimpawu zeMbali ezivela kuMvelaphi weGuerin Igama kwiClare
Incoko kaPat Guerin kwimvelaphi ye 'Guerins Co. Co.'
I-GUERIN I-Forum yozalo lweentsapho
Le bhodi yemilayezo yamahhala igxile kwinzala kaBerin ookhokho emhlabeni jikelele.
Uhlobo loSapho - GUERIN Genealogy
Hlola iziphumo ezingaphezu kwama-400,000 kwiiirekhodi zomlando ezichongiweyo kunye nemithi yentsapho edibeneyo yomgca enxulumene nomnxeba waseGuerin kule webhusayithi yamahhala ebanjwe yiCawa likaYesu Kristu we-Saints-Day Saints.
I-GUERIN Igama lomnxeba
Uluhlu lokuposa lwamahhala abaphandi be-Guerin nomnxeba kunye nokuhluka kwawo kubandakanya iinkcukacha zokubhaliselwa kunye neengxelo ezigcinwe ngophawu lwemiyalezo edlulileyo.
DistantCousin.com - GUERIN Umzukulwana woBantu kunye neMbali Yentsapho
Hlola ii-database zolwazi zamahhala kunye neefalo zodidi lwegama loGuerin.
I-GeneaNet - Iirekhodi zeGuerin
I-GeneaNet ibandakanya iirekhodi zokugcinwa kweengxelo, imithi yentsapho kunye nezinye izibonelelo kubantu abaneGrazil, kunye neenkcukacha kwiintsapho kunye naseFransi nakwamanye amazwe aseYurophu.
I-Guerin Genealogy and Family Tree Page
Dlulisa amehlo kwiirekhodi zomnxeba kunye neenkcukacha ezibhalwe kwizahlulo zoobuhlanga kunye neembali zabantu ngabanye ngefayile yeGuerin kwiwebhusayithi yeGenesalogy Today.
I-FERNANDEZ Igama lomnqophiso kunye neMbali Yentsapho
I-CHAVEZ - Igama elitsha kunye nomvelaphi
I-HERRERA - Yithi Igama & Isiqalo
I-Soft Rock Iingoma zee-80s
Uguqulwe kwi-Bestseller yiNcwadi yoMntu
Iingcebiso ezili-12 malunga nendlela yokuPhucula iNtetho ye-Admissions
Iingxelo ze-Archaeology - Iqoqo lee-Quotes malunga nexesha lethu elidlulileyo
I-Basic Basics: I-Map Road
Imfazwe Yomthonyama yaseMerika: IyokuQala iMfazwe yeBull Run
Ithempeli likaFaro Hatshepsut kaDeir el-Bahri eYiputa
Iindlela ezi-3 eziNokuthi zibiwe
Kutheni izikolo zaseburhulumenteni zase-US zingabi nomthandazo
Ukuhlanganisana Ukudibanisa Inkcazo kunye nemizekelo
Imfazwe Yomthonyama yaseMerika: iMfazwe yeMill Springs
Indlela yokuhlela iiRekhodi kwiDelphi DBGrid
Izixhobo ezithandathu zeNtetho ye-ESL Abafundi
Iintlanzi ezilishumi ezigqwesileyo kakhulu
Ibali likaSamuel Clemens, igama elibizwa ngokuba yiPenst Famous Name, uMark Twain
I-University of Concordia I-Irvine Admissions
IYunivesithi yaseAnderson (e-Indiana)
Umgaqo-nkqubo we-USGA / R & A wokuGembula ngabaGoli be-Amateur
Ra, uSanga uThixo waseYiputa wamandulo
Ukwenza izibetho ezifanelekileyo zekopi, し, す, せ, そ (Sa, Shi, Su, Se, Ngoko)